ပြင်ဦးလွင်၌ ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်တစ်ဦး ပြင်ပဒဏ်ရာမရှိဘဲ သေဆုံးနေ - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆- နေ့ချင်း ပြန် ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်တစ်ဦး ပြင်ပဒဏ် ရာမရှိဘဲ သေဆုံးနေမှု ပြင်ဦးလွင် မြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့ မြမာလာရပ်ကွက် အဝေး ပြေးကားကြီးကွင်းအနီး မန္တလေး- လားရှိုး-မူဆယ် (ပြည်ထောင်စုကား လမ်းမကြီး)အတိုင်း ကျောက်မဲမှ မန္တလေးသို့ မောင်းလာသော ရွှေ ပြည်သာ နေ့ချင်းပြန် ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်က လမ်းမကြီးဘေးရှိ စံပြထမင်းဆိုင်သို့ ထမင်းစားရပ်နားစဉ် ခရီးသည်တစ်ဦးဖြစ်သူ မြင်းခြံမြို့နယ်နေ အသက်(၃ဝ)ခန့် အရွယ် ကိုစိုင်းရာဇာမှာ ကားပေါ်မှ ဆင်းမလာသဖြင့် တက်ရောက်ကြည့် ရှုရာ ၎င်းထိုင်ခုံတွင် ခေါင်းမှီပြီးပါးစပ်ဟလျက် ငုတ်တုတ် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း အခင်းဖြစ်ရာသို့ သွားရောက်သူ သန္တိသုခအခ မဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်း(ပြင်ဦးလွင်) မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပြောသည်။
ခရီးသည်မှာ ကားစီးလာက တည်းက သေဆုံးနေသည်ဟု ယူဆ ရကြောင်း၊ ၎င်းအနီးမှ ခရီးသည်များကလည်း သေနေသည်ကို မသိခဲ့ ကြောင်း၊ ၎င်းတွင် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပ ဒဏ်ရာမတွေ့ကြောင်း၊ အလောင်းကို ပြင်ဦးလွင် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်း က ပြောသည်။
”သူက မြင်းခြံကိုလာတာ။ ကားသမားက ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းစားဖို့ အနားပေးတယ်။ သူက ကားပေါ်က ဆင်းမလာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ အသက်မရှိတော့လို့ အသင်းကို ဖုန်းဆက်လို့ သွားသယ်ပေးတာ။ သူက ကားစီးနေတဲ့အတိုင်းပဲ။ ထိုင်လျက် လေးကို ခေါင်းမှီနေတယ်။ ဘယ်သူ မှတော့ သေနေတယ်လို့ ထင်မှာမဟုတ်ဘူး”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
¤င်း၏ နာမည်နှင့် နေရပ်လိပ် စာကို ကားလက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းတွင် တွေ့ရသဖြင့် ¤င်းမိဘများသို့ ဆက် သွယ်အကြောင်းကြားခဲ့ကာ ယနေ့ ညနေပိုင်းအထိ ရောက်မလာသေး ကြောင်း သန္တိသုခ အခမဲ့ လူမှုကူ ညီရေးအသင်း (ပြင်ဦးလွင်)မှ အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
”သူက ကျောက်မဲမှာ အလုပ် လုပ်ပြီးတော့ မြင်းခြံက သူ့မိဘတွေ ဆီကို ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ပြန် လာမယ်လို့ သူ့အိမ်က ဖုန်းဆက်လို့ ပြောတာပဲ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
သေဆုံးသူ၏ အိတ်ဆောင်ထဲ မှ သွေးကျဆေးနှင့် အဖျားပျောက် ဆေးများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် ငွေကျပ် ၅ဝဝဝ တန်နှင့် ၁ဝဝဝ တန်အချို့တွေ့ ရကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
ခရီးသည်သေဆုံးမှုကို အသိ ပေးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ် ဦးက ပြောသည်။
တာဝန်ယူတတ်ရမယ်၊ ကြင်နာတတ်ရမယ်၊ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံတတ်ရမယ် !!!! နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း !!!!!